Zviitiko zvinogona kukonzera kuputsika kwemusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Zviitiko zvinogona kukonzera kuputsika kwemusika wemasheya
Kupunzika mumusika wemasheya chiitiko icho chakanyatso kuvharika mundangariro dzevazhinji vashoma uye vepakati varimi. Izvo hazvigone kukanganikwa kuti mune dzimwe nguva equities dzakura nekukomberedza makumi masere %, sezvazvakaita kuUnited States. Chokwadi ichi chine chekuita nekuvandudzwa kweiyo bearish mamiriro munguva pfupi kwete kupfuura, izvo zvinogona kubata chikamu chikuru chevatengi vane nzvimbo dzavo dzakavhurika mumisika yequity vasina kurinda. Saka zvinozove zvinobatsira kwazvo kana tikakwanisa kuva nemamwe makiyi pakutangisa kufamba uku mumusika wemasheya.
Chimwe chinhu chiri kutariswa mazuva ano nevanoongorora zvemari mukana wekuti kuderera kukuru kunoitika munyika dzakasimukira kwazvo pasi rose. Izvi zvinogona kutungamira mukurasikirwa mumisika yemari kuve kwakakosha kwazvo kunonoka kutora chinzvimbo. Kunyangwe iine mukana chaiwo wekuti isu tinogona kurasikirwa kusvika hafu yemari yakadyarwa mazuva ano. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu atinofanira kudzivirira pamusoro pezvimwe zvese zvinoonekwa. Kukwira kukuru mumusika wemasheya kunoteverwa nekugadziriswa kunonzwisisika mukuenderana kwemitengo yayo.
Nepo kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti kune akawanda ezvivigiro akanyorwa pamisika yemari iyo zvakanyanyisa kuwedzerwa. Mumwe weiyi mienzaniso unogadzirwa neavo vari muchikamu chemagetsi vasina kumira kukwira mumwedzi yapfuura uye vasvika pakukosha pamusoro pemitengo yavo. Kuve chikamu chine njodzi kuvhura nzvimbo panguva ino chaiyo nekuda kwesimba rekukwira mumavhiki apfuura. Iko mune idzi nguva kune zvakawanda izvo zvinogona kurasikirwa kupfuura kuwanikwa.
1 Kuwa: mhinduro dzebhizinesi
2 Kufambira mberi muyero kukwira
3 Kubaya mune yeiyo real estate chikamu
4 Volatility mukutsinhana kwemari
Kuwa: mhinduro dzebhizinesi
Mhedzisiro inotevera yebhizinesi ichave yakakwana thermometer yekuyera mamiriro chaiwo emakambani akanyorwa pamisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Kusvika pakuti vamwe lousy bhizinesi mhedzisiro vanogona kuve chinokonzera kukanganisika kwekudonha mumitengo yemasheya. Kunyanya kana ivo vari pazasi peizvo zvinotarisirwa zvakagadzwa nemisika yemari. Naizvozvo, hakuzovi nesarudzo kunze kwekutarisa kune kwayo shanduko munzvimbo dzinouya.
Kune rimwe divi, zvichave zvakare zvinonakidza kwazvo kuona kuti kuita kwemakambani akanyorwa kunenge kuri kune kushomeka kwekukura kwehupfumi mumasimba makuru epasi. Nekuti zvirizvo, fungidziro yemasangano makuru epasirese (kusanganisira iyo International Monetary Fund) anoenda nenzira iyi. Nekusvika kwekuuya kunodzikira muhupfumi hwenyika dzese. Semhedzisiro, mumaonero eIMF, Brexit uye nematambudziko ehupfumi muChina. Kana kusimba kwavo kuchinyanya kutaurwa, hapana mubvunzo kuti zviitiko izvi zvinokanganisa zvakanyanya pamisika yemari kutenderera pasirese.
Kufambira mberi muyero kukwira
Chimwe chinhu chakakodzera chinogona kuve nemhedzisiro yakaipa pamisika yemasheya kutenderera pasirese ndeyekuti mabhanga epakati eEuropean Union neUnited States mhindu dzinokwira kumberi kupfuura pakutanga zvaitarisirwa. Vangave nemhedzisiro yakaipa pamisika yezvemari uye pamwe nekugona chaiko kuti kudonha kukuru kunogona kuitika mumisika yepasi rose, kunyangwe nekudonha mumutengo wemasecurity ekubhangi. Pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Nepo kune rimwe divi, shanduko iyi mumutemo wezvemari, mune idzi nzvimbo dzinokosha dzenzvimbo, ingangotambirwa zvakashata nevatengesi vadiki nepakati. Kupi kutengesa kumanikidza kwaizokunda nekristaro yakajeka pane yekutenga ikozvino. Ndokunge, kurasikirwa kwekukosha muzvikamu zvemakambani zvakanyorwa pamisika yemari. Uye izvo zvinogona kukonzera nyonganiso nyowani mumisika yemari iyi. Hazvishamisi kuti isu tichafanirwa kunyatsoteerera zvinogona kuitika mazuva ano kumabhangi ari kuburitsa mativi ese eAtlantic. Nekuti mari zhinji yave panjodzi kubva zvino zvichienda mberi.
Kubaya mune yeiyo real estate chikamu
Nezve musika weSpanish equity, njodzi huru inogona kubuda kubva mukushanduka kwenzvimbo yezvivakwa. Imwe yeakanyanya kukosha ehupfumi hwenyika uye pane iyo Gross Dzimba Chigadzirwa (GDP). Mupfungwa iyi, njodzi yehunguru nyowani muchikamu ichi inotangazve mamiriro matsva mumusika weSpanish wemusika. Kwete chete mumitengo yebato rezvidhinha, asiwo mune mamwe akasara ayo akabatawo mamiriro aya anotariswa nevamwe vanoongorora misika yezvemari.
Nepo kune rumwe rutivi, kune chiratidzo chidiki chiri kupa chiratidzo chidiki nezve iyi mamiriro uye ndiko kuwedzera kwemutengo weimba. Iko iko kwazvino dhata kunoratidza kuti 100 mita yemamirati furati mune yakasarudzika Salamanca dunhu reguta reSpain rine avhareji mutengo wakakomberedza 700.000 euros. Mushure mekuwedzera kwemitengo yemabasa aya anenge ari gumi muzana. Kutya kunotungamira munhu kufunga kuti uyu musika wakanyanyisa kukosheswa uye kuti unogona kukonzeresa unotyisa real estate bubble.
Volatility mukutsinhana kwemari
Kunyangwe zvisinganyanyo kukosha, mari yekutsinhana mari haigone kuregeredzwa. Iko mumazuva achangopfuura iyo euro yakanga yadonha yakanangana nenzvimbo ye1,12 yemadhora uye kubva padanho iro, isina kurasikirwa nayo pamitengo yekuvhara zuva nezuva, yakatanga kuwedzera. Asi kuratidza kumwe kusagadzikana mumusika wekutsinhana uye izvo zvinogona kukonzera kusiyana kwakanyanya pakati pevamwe vanobata mari idzi dzenyika. Kunyangwe pamutengo wevanofungidzira vachikwanisa kuwana mibairo mikuru mukuita kwenguva pfupi, tichifungidzira dzimwe njodzi mukuita kuri kuzoitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zviitiko zvinogona kukonzera kuputsika kwemusika wemasheya
Yakagadziriswa mari kana musiyano wemari?
Investment muzvisungo zvisungo zveBasque hurumende